ThinkVine साथ भविष्यवाणी मार्केटि Marketing एनालिटिक्स | Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 2, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यदि तपाईं आफ्नो मार्केटिंग मिश्रण परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ भने लगानीमा फिर्ती के हुन्छ?
यो एक प्रश्न हो कि जटिल मार्केटिंग रणनीतिहरूको साथ ठूला ग्राहकहरू (जुन मध्यम माध्यमहरूको बीचमा सन्तुलित हुन्छ) प्रत्येक दिन आफैलाई सोध्छ। के हामीले अनलाइनका लागि रेडियो छोड्नु पर्छ? के म टेलिभिजनबाट मार्केटि search सर्च गर्न जान्छ? यदि मैले अनलाइन मार्केटिंग शुरू गरें भने मेरो व्यवसायमा कस्तो असर पर्नेछ?
सामान्यतया, उत्तर परीक्षणको असंख्यको माध्यमबाट आउँदछ र मार्केटिंग डलर हरायो। अहिले सम्म। बजारहरूले भविष्यको मार्केटि performance प्रदर्शनको पूर्वानुमान गर्न विगतका प्रयोगहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। यससँग जोडिएको ठूलो जोखिमहरू छन् किनकि समयसँगै नयाँ माध्यमहरू थपिएका छन्। वर्गीकृत पत्रिकाबाट अनलाइनमा परिवर्तन गर्नु केवल एउटा सानो उदाहरण हो। यदि तपाईं आफ्नो वर्गीकृत खर्च तिनीहरूलाई अनलाइन बदलाव बिना जारी राख्नुभयो भने, तपाईं अधिकतम क्षमतामा पुग्नुहुने छैन। वास्तवमा, तपाईं केवल आफ्नो पैसा बर्बाद हुन सक्छ।
थिंकभिन लगभग दशकदेखि "के भयो" परिदृश्यहरूमा काम गर्दैछ। तिनीहरूका ग्राहकहरू धेरै प्रभावशाली छन् ... सनी डिलिइट, एससी जॉनसन, कानूनीजुम, डेल मोन्टे, हर्से, र सिट्रिक्स अनलाइन।
थिंकभिनले यो प्रमाणित एजेन्ट-आधारित मोडलि system प्रणाली मार्फत गर्न सक्दछ जुन वास्तवमा १ 1940's० को दशकमा विकसित भयो। मार्केट खण्डहरू बुझ्ने जसले तपाइँबाट प्रत्येक माध्यम मार्फत खरीद गरेका छन् र मोडेललाई अन्य माध्यमहरूमा सेगमेन्ट लागू गरेर, थिन्कभिनले तपाइँको मार्केटिंगले ती अन्य माध्यमहरूमा कसरी काम गर्दछ भनेर पूर्वानुमानित मोडेल निर्माण गर्न सक्षम छ। यो एकदम प्रणाली छ।
थिंकवाइनले विकास गर्ने परिदृश्यहरू दीर्घकालीन, अवसर-आधारित मार्केटिंग, र सेगमेंट-आधारित मार्केटि efforts प्रयासहरूको लागि अल्पकालीन प्रयोग गर्न सकिन्छ। थिंकभिनले अन्तिम परिदृश्यको पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दछ ... के हुन्छ यदि तपाईंले मार्केटिंग पूर्ण रूपमा रोक्नुभयो भने!
थिंकवाइनको मार्केटिंग सिमुलेशन र योजना सफ्टवेयरको उत्पादन यात्रा गरेर थप सिक्नुहोस्।
पूर्ण खुलासा: सीईओ डेमन रागुसा र मैले ब्रुस टेलरको साथ काम गर्यौं प्रोसेज धेरै वर्ष पहिले प्रत्यक्ष मेल मार्केटिंगमा समान कार्यविधिहरू लागू गर्न। डेमनले ग्राहक प्रोफाइलहरूबाट गतिशील सांख्यिकीय मोडेलहरू बनाए र ब्रुसको अटोमेसनको प्रयोग गरेर हामी ती मोडेलहरूलाई सम्भावित डाटाबेसहरूमा लागू गर्न स्वचालित गर्न सक्दछौं। एप्लिकेसनलाई प्रोस्पेक्टर भनिन्थ्यो र राम्रोसँग काम गर्‍यो। ब्रुसले वर्षौंको बखत एप्लिकेसनलाई ट्यून गरे र अझै धेरै ठूला प्रत्यक्ष मार्केटिंग ग्राहकहरूको लागि यसलाई उपयोग गर्दछ।
टैग: भविष्यवाणीभविष्यवाणी एनालिटिक्सभविष्यवाणी बजारथिइनभिन
डग, कस्तो किसिमको खरीद ईतिहासको थिंकभिनलाई यो गर्न सक्षम हुनु आवश्यक पर्दछ? के तिनीहरूले नयाँ / स्टार्टअप कम्पनीको लागि यो गर्न सक्छन्?
यसको लागि निश्चित रूपमा ऐतिहासिक डाटा आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कि यदि तिनीहरूसँग पर्याप्त ग्राहकहरू छन् भने, समग्र प्रोफाइलहरू सम्भव हुन सक्छ। श their्कास्पद कि उनीहरूका ग्राहकहरूले त्यो कदर गर्दछन्, यद्यपि! मलाई लाग्छ कि उनीहरूले डेटाको कम्तिमा १ वर्ष प्रयोग गर्छन् - मलाई लाग्छ २ सिफारिस गरिएको छ।